I-RFP360: Itekhnoloji eKhanyayo yokuThatha iintlungu kwii-RFPs | Martech Zone
Ndichithe lonke ikhono lam kwintengiso yesoftware kunye nentengiso. Ndizamile ukuzisa izikhokelo ezishushu, ukukhawulezisa umjikelo wentengiso, kunye nokuphumelela ukujongana- oko kuthetha ukuba ndityalile amakhulu eeyure zobomi bam ndicinga, ndisebenza kwaye ndiphendula ii-RFPs - ububi obuyimfuneko xa kufikwa ekuphumeleleni ishishini elitsha .
Ii-RFPs bezisoloko ziziva ngathi azisokuze zisukelwe iphepha-yinkqubo ecothayo ecothayo efuna ukuzingela iimpendulo kulawulo lweemveliso, ukungqubana nemicimbi yezomthetho, yokusombulula iingxaki nge-IT, kunye nokuqinisekisa amanani ngemali. Abo baqhelekileyo bayazi-uluhlu luyaqhubeka. Ukuthengisa, ukuthengisa kunye nophuhliso loshishino lweengcali zichitha iiyure ezingenakubalwa ngokuhluza iimpendulo zangaphambili kwimibuzo ephindaphindwayo, ukuleqa iimpendulo kwimibuzo emitsha, ukuqinisekisa ulwazi kunye nokufuna ukuvunywa amaxesha ngamaxesha. Inkqubo inzima, ichitha ixesha kunye noxinzelelo kuyo nayiphi na into yombutho.
Ngaphandle kokuvela ngokukhawuleza kwetekhnoloji, kumashishini amaninzi, inkqubo ye-RFP itshintshe kancinane kakhulu kumava am ekuqaleni kobomi bam ngaphezulu kweshumi leminyaka elidlulileyo. Amaqela entengiso asasebenzisa iinkqubo zemanyuwali ukudibanisa izindululo, kusetyenziswa iimpendulo ezitsalwe kulo naliphi na inani lemithombo enokuhlala kwi-Excel spreadsheet, ekwabelwana ngayo nge-Google kunye ne-imeyile.
Oko kwathiwa, ayisiyiyo kuphela into yokuba sinqwenela ukuba inkqubo ye-RFP isebenze ngakumbi, eli shishini liqala ukuyifuna, kulapho isoftware evelayo imi ukuba yenze impembelelo enkulu kwimbonakalo ye-RFP.
Izibonelelo zeSoftware yeRFP
Ngaphandle kokwenza ukwakhiwa kwe-RFP kungabi buhlungu kangako; ukuseka inkqubo ekhawulezayo, enokuphindwa ye-RFPs kunokuba nefuthe ngqo kwingeniso. Kulapho ubuchwepheshe beRFP obuvelayo bungena khona.
Isoftware ye-RFP igxila kwiikhathalogu zemibuzo eqhelekileyo kunye neempendulo kwilayibrari yomxholo. Uninzi lwezi zisombululo lusekwe kwilifu kwaye luxhasa intsebenziswano yexesha lokwenyani phakathi kwabaphathi bezindululo, iingcali zemicimbi yezifundo kunye nabamkeli benqanaba lesigqeba.
Ukuthi ngqo, YOKWENZIWA yenza ukuba abasebenzisi bakhawuleze:
Gcina, fumana kwaye uphinde usebenzise umxholo kunye neSiseko soLwazi
Sebenza nabantu osebenza nabo kuhlobo olunye loxwebhu olunye
Nika imibuzo, landela inkqubela phambili kwaye wenze izikhumbuzo ngokuzenzekelayo
Phendula iimpendulo nge-AI echonga imibuzo kwaye ukhethe impendulo echanekileyo
Fikelela kwiSiseko soLwazi kwaye usebenze kwizindululo kwi-Word, Excel kunye ne-Chrome nge-plug-ins.
Ngenxa yoko, abasebenzisi be YOKWENZIWAIsisombululo solawulo lwesindululo sixele ukuba babenako ukunciphisa ngokukhawuleza amaxesha okuphendula, bandise inani le-RFPs abakwaziyo ukugqiba kwaye, kwangaxeshanye, baphucula amaxabiso abo okuphumelela.
Siphendule nge-85 yepesenti ye-RFPs kulo nyaka kunokuba besenzile kunyaka ophelileyo, kwaye sonyuse izinga lokuqhubela phambili ngeepesenti ze-9.
U-Erica Clausen-Lee, igosa lesicwangciso eliyintloko kunye ne-InfoMart
Ngeempendulo ezikhawulezayo, uya kuba namathuba ngokubanzi okuhambisa iimpendulo ezingqinelanayo, ezichanekileyo nezisebenzayo ezinokuthi ziphumelele kwishishini.
Ukunyusa ukungqinelana kweRFP
Sebenzisa iQonga loLwazi lweQonga, abasebenzisi banokugcina ngokulula, bacwangcise, bakhangele kwaye baphinde basebenzise umxholo wesindululo esidlulileyo, babanike ukuqala kwempendulo yeRFP. Indawo esembindini womxholo wesindululo ugcina iqela lakho lingazibhali iimpendulo ezikhoyo, likuvumela ukuba uqokelele idatha kwaye ugcine ezona mpendulo zisetyenziswayo kwixesha elizayo.
Sinokhuselo lokwazi ukuba ulwazi lwethu lukhuselekile kwaye luyahambelana. Akunyanzelekanga ukuba sibe nexhala lokuba siza kuphulukana nabuphi na ubuchwephesha beSME ukuba umntu uyekile okanye uthathe iholide. Asichithi iiyure sizingela iimpendulo zangaphambili kwaye sizama ukuqonda ukuba ngubani owenzayo kuba yonke imibuzo kunye neempendulo zilapho eRFP360.
UBeverly Blakely Jones ovela kuFundo lweLizwe lweJografi | Isifundo seCengage
Ukuphucula ukuchaneka kweRFP
Iimpendulo ezingachanekanga okanye eziphelelwe lixesha zinokuba yinkohliso ekubambeni, nakwelona lungu leqela linamava. Xa ubhangqiwe ngumhla wokugqibela wokujika ngokukhawuleza kwi-RFP, umngcipheko wokubonelela ngolwazi oluchanekileyo. Ngelishwa, ulwazi oluchanekileyo lunokubiza kakhulu kuba oko kunokukuhlawulela kwawona shishini ujonge ukulandela. Impendulo ye-RFP engachanekanga ingakhokelela ekubeni ikhutshelwe ecaleni kuthatho-thethwano, uthethathethwano olude, ukulibaziseka kwisivumelwano okanye okubi kakhulu.
Isoftware esekwe kwi-RFP isombulula le ngxaki ngokuvumela amaqela ukuba ahlaziye iimpendulo zawo naphi na nangaliphi na ixesha ngokuzithemba kokwazi ukuba utshintsho lubonakaliswa banzi kwinkqubo.
Umzekelo, olu hlobo lokusebenza sisixhobo esikhulu esinokubakho xa imveliso okanye inkonzo ihlaziywa rhoqo efuna ukubandakanywa kwimpendulo esemgangathweni. Kwiimeko ezininzi, zijamelene nolu hlobo lotshintsho, amaqela kufuneka asebenze kuyo yonke itshathi yombutho ukuqinisekisa ukuba uhlaziyo lwamkelwa kwiziko kwaye emva koko lilandele nelungu ngalinye ukuqinisekisa ukuba lenziwe kwinqanaba lomntu ngelixa liphinda lisitshekishe isindululo ngasinye phambi kokuba Phuma. Kuyadinisa.
Isoftware ye-RFP esekwe kwilifu ilawula olu tshintsho kwishishini lonke kwaye isebenza njengendawo yokucoca indawo yokuphucula umxholo.
Ukuphucula ukusebenza kweRFP
Olona ncedo lukhulu kwisoftware ye-RFP yindlela yokusebenza ephuculwa ngokukhawuleza- ngendlela yayo, ixesha elithathwayo ukwakha i-RFP isebenzisa olu hlobo lwetekhnoloji ifana numahluko phakathi kokuqhuba unxweme ukuya kunxweme kunye nokubhabha. Uninzi lwezisombululo zesoftware ye-RFP, kubandakanya i-RFP360, ikwasekwe kwilifu, evumela ukuthunyelwa ngokukhawuleza, okuthetha ukuba iziphumo ziphantse zabakho kwangoko.
Ixesha lokuxabisa (TtV) ngumbono wokuba kukho iwotshi elandelela ukuba umthengi uthatha ixesha elingakanani kwisivumelwano esisayiniweyo ukuya 'kumzuzu we-ah' xa baliqonda ngokupheleleyo ixabiso kwaye bevula amandla esoftware. Kwisoftware ye-RFP, lo mzuzu ngokwesiqhelo wenzeka kwiiveki ezimbalwa emva kokuba ikhontrakthi isayiniwe xa umsebenzisi esebenza neqela lamava kubathengi kwi-RFP yabo yokuqala. Iimpendulo ezisemgangathweni kunye nesindululo sokuqala zilayishwe kwinkqubo, emva koko ngumzuzu we-ah-isoftware iyayamkela imibuzo kwaye ifake iimpendulo ezichanekileyo, igcwalise umndilili ojikeleze iipesenti ezingama-60 ukuya kuma-70 e-RFP- ngomzuzwana nje.
Sifumanise ukuba i-RFP360's interface yayiyeyona inomdla kwaye kulula ukuyivula isebenze. Kubekho igophe lokufunda elincinci kuthi, kwaye ivumele ukusebenza kwethu ukuba kwandise phantse kwangoko.
U-Emily Tippins, uMlawuli weNtengiso weSondlo seSwitzerland | Into yokuphonononga
Ukuvela kwenkqubo ye-RFP kunika abasebenzisi ixesha lokuba baphinde bajonge kumanqanaba aphezulu, kumalinge obuchule.
Ngokuqinisekileyo isenze sasebenza ngakumbi. I-RFP360 isibuyisele ixesha lethu kwaye yasivumela ukuba sikhethe ngokwenene kwaye sikhethe iiprojekthi zethu. Asisaxhalabi kwakhona. Singathatha umoya ophefumlayo, sigxile ekubeni sisicwangciso-qhinga kwaye siqiniseke ukuba sikhetha iiprojekthi ezilungileyo kwaye sinika iimpendulo ezisemgangathweni.
UBrandon Fyffe, onxulumene nophuhliso lweshishini kwiCareHere
I-RFP yeTekhnoloji kufuneka ibekhona
Ishishini ngaphaya kwe-RFPs -Isoftware yokuphendula ayisiyo-RFPs kuphela, unokulawula izicelo zolwazi (ii-RFIs), ukhuseleko kunye nemibuzo ekhutheleyo (DDQs), izicelo zeziqinisekiso (ii-RFQs) nokunye. Itekhnoloji inokusetyenziselwa naluphi na uhlobo lwemibuzo esemgangathweni kunye nefom yeempendulo ezineempendulo eziphindaphindayo.
Ukusebenziseka kwinqanaba eliphezulu kunye nenkxaso -Ayinguye wonke umntu osebenza kwii-RFPs ungumsebenzisi ophezulu. Ii-RFPs zifuna igalelo kumasebe amaninzi kunye neengcali zemiba ngamanqanaba ahlukeneyo ezakhono zobugcisa. Khetha isisombululo ekulula ukusisebenzisa nesinomdla ngenkxaso ebalaseleyo kubathengi.
Amava kunye nozinzo -Njengaye nawuphi na umboneleli wetekhnoloji ye-SaaS, unokulindela uhlaziyo rhoqo kunye nezixhasi kwitekhnoloji ye-RFP, kodwa qiniseka ukuba inkampani inamava okunikezela ngeempawu ezifanelekileyo onokuzithemba.
Okubelelwe elwazini Isisombululo ngasinye se-RFP kufuneka sibandakanye umxholo wokukhangela umxholo ovumela abasebenzisi bakho ukuba basebenzisane ngokulula kwaye babonelele ngohlaziyo kwiimpendulo abazinikiweyo. Khangela isisombululo esisebenzisa i-AI ukuhambelana nemibuzo eqhelekileyo kwiimpendulo zabo.
Ii-plug-ins ezikrelekrele kunye nokudityaniswa Itekhnoloji ye-RFP kufuneka isebenze kunye neenkqubo ozisebenzisayo. Khangela ii-plug-ins ezikuvumela ukuba usebenzise isiseko sakho solwazi ngelixa usebenza kwimpendulo yakho kwiinkqubo ezinjengeLizwi okanye i-Excel. Isoftware kufuneka ikwadibanise ne-CRM ephambili kunye nokusetyenziswa kwemveliso ukuxhasa ngaphandle komthungo iinkqubo zakho ezikhoyo ze-RFP.
Ukuchitha ixesha elincinci kwaye uphumelele ii-RFPs ezingakumbi
Ii-RFPs zimalunga nokuphumelela. Ziyilelwe ukunceda umthengi athathe isigqibo sokuba ngubani na olungileyo, kwaye ngokukhawuleza ungangqina ukuba ishishini lakho liyayifanela ibhilikhwe, ngcono. Isoftware ye-RFP ikhawulezisa inkqubo yakho ukuze ikuthathele ingqalelo ngokukhawuleza, ivale ishishini ngakumbi kwaye ikunike namathuba angakumbi okuphumelela.
Njengamaqela entengiso ahambelana ngakumbi nangakumbi kunye nokusebenzisana nemisebenzi yengeniso, itekhnoloji ye-RFP iba ​​yinto ebaluleke ngakumbi kwinkqubo. Imfuno yeempendulo ezikhawulezayo ze-RFP ayizukuhamba. Ke musa ukulinda de ungabinako ukuyithatha kwakhona ukwamkela itekhnoloji ekongela ixesha kwii-RFPs zakho. Ngokuqinisekileyo abo bakhuphisana nawe abayi kuyenza.
Cela i-RFP360 Demo
tags: isicelo sokucebisarfpiqonga le-rfplwenemyaiswish yesondloixesha lokuxabisaitv
U-Beau Wysong ligosa eliyintloko lentengiso e YOKWENZIWA. Usebenzisa imvelaphi yakhe ethe kratya kwintengiso yetekhnoloji kunye nentengiso ukuqhuba ukukhula kweshishini kwinkampani yesoftware. U-Beau unoxanduva lokwakha uphawu olukhokelela kwintengiso, ukubandakanya abathengi kunye nokufundisa abathengi bexesha elizayo ngolwazi.